Ukusebenzisana kwi-UTM kunye ne-Google Earth-Geofumadas
NgoNovemba, 2009 Google umhlaba / imephu
Plex.mark! luphuhliso olwenziwe kwi-Google Earth ActiveX, oluququzelela ukusebenza ngqo kwi-UTM, kungekhona nje kuphela ukufumana izilungelelaniso kodwa nokungena. Ikhululekile.
Kufuneka ukuba khuphela kwiPlescape, umenzi weenkampani zamaGrike Izixhobo zePlex.Earth; emva kokufakela, ukufikelela okuthe ngqo kudala kwi desktop. Ukuyiqhuba kufuneka ube neGoogle Earth kwaye ufanele usebenze ilayisenisi ngokusebenzisa ikhonkco efika kwi-imeyile.
Okuthakazelisayo, endaweni yokuba ne-cursor ngokuhamba ngokukhululeka, oko unakho isikhombisi esicacisiweyo kwinqanaba, kwaye ukufumana ingqalelo into eyenziwe ukuhambisa imvelaphi ukwenzela ukuba iphuzu elithandayo lifanise le pointer .
Qaphela ukuba okulula kubangela ukhetho lokukhetha indawo, kulo mzekelo, esi siqendu yi-DF, sikhethe indawo ye-14 N. Ukuze ufumane ulungelelaniso, uphawu lukhethiwe Indawo yoPhahla, kwaye iphaneli iphakanyiswe kunye neenkcukacha zokukhetha igama. Ngeenjongo eziphambili, unokuyikopisha / unamathisele iinqununu.
Amaqhosha amabini anikwe ipaneli indawo yokubeka indawo, owokuqala ukubeka ingongoma, ungangena ukulungelelanisa ngokuthe ngqo okanye ngekhophi / unamathisele, kwaye iphuzu lifumaneka kwindawo apho izilungelelaniso zithetha. Emva koko ifayile ingagcinwa njenge kml / kmz ukuba ifakwe kwenye inkqubo ye-CAD / GIS; Kuyathakazelisa ukuba le ngongoma ayiyi kuququzelela i-lat / lon kodwa i-UTM kunye negama.
Inkinobho yesibini ukuhlaziya idatha, xa uhamba ngokufuduka, ufumana ulungelelaniso lwendawo apho isikhokhelo sitholakala khona. Inkqubo yokufaka amaphuzu kukuba:
Hambisa isikhombisi, ubuyekeze izilungiso, igama igama, qalela indawo.
Akulunganga, sicinga ukuba le nto yokudlala iyakukhula, sicinga ukuba into elandelayo iya kuba kufaka iipolgoni kunye ne-pololilineas nge-snapping. Bathembise ukuba bangithumelele inguqu ye-beta ngokukhawuleza xa bekulungele.
Eyona nto ibhetele ndiyibonile kwimidlalo yeGoogle Earth, ngqalelo ukuba ayikho intlawulo.
Apha ungayilanda Indawo.mark!, Ikhululekile.
Post edlulileyo«Edlulileyo gvSIG: izixhobo ze-CAD ze-21
Post Next I-Bentley Geopak, ingqiqo yokuqalaOkulandelayo "